थाहा खबर: मलाई माफ गरिदिनुहाेला : शृंखला खतिवडा
मलाई माफ गरिदिनुहाेला : शृंखला खतिवडा
काठमाडौं : यतिबेला शृंखला खतिवडाको चर्चा चलिरहेको छ। मिस नेपाल २०१८ की विजेता शृंखला अहिले मिस वर्ल्डको प्रतिस्पर्धाको लागि चिनमा छिन्। उनलाई लिएर धेरै नेपालीहरू आशावादी छन्। उनलाई समर्थन गर्नेहरूको जमात निकै ठूलो छ।
तर शनिबार राति भएको 'हेड टु हेड'मा शृंखला पराजित भइन्। उनी सिंगापुरकी भेनिसा पेहसँग पराजित भएकी थिइन्। हेड टु हेडमा पराजित भए पनि उनको मिस वर्ल्डको यात्रा रोकिएको छैन। उनको टप ३० मा पर्ने सम्भावना अझै छ। टप ३० मा जाने मल्टिमिडिया अवार्ड र ब्युटी विथ पर्पजमा भने शृंखलाको सम्भावना बलियो देखिन्छ।
हेड टु हेड च्यालेन्ज हारेपछि शृंखला 'फेसबुक लाइभ'मा आएर आफ्नो समर्थकहरूसँग माफी मागेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, 'मलाई पनि अवस्य मन थियो कि हेड टु हेड जितेर नेपाललाई टप ३० मा पुर्‍याउँ। तर हिजो साह्रै दुःख पनि लाग्यो कि यस्तो सपोर्ट पाउँदा पनि मैले तपाइहरूको अपेक्षा पूरा गर्न सकिनँ। म सरी भन्न चाहान्छु।'
आफूले उक्त हेड टु हेड च्यालेन्ज हार्नुको कारण पनि उनले फेसबुक लाइभमा बोलेकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, 'हामीलाई ब्रिफिङमा चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट प्रस्तुत नगर्नुहोला। यो प्रस्तुति शैलीबारे मात्रै हो भनिएको थियो। मैले त्यही ब्रिफिङ फलो गरेँ। साढे एक मिनेट मात्रै समय थियो। टाइम लिमिटले नै धोका दिने हो कि भनेर मैले एकदम धेरै पूर्वतयारी गरेकी थिएँ। सायद धेरै तयारी पनि भयो कि के भयो, बीचमा बोल्दाबोल्दै एक-दुई लाइनचाहिँ भन्न छुटेको रहेछ। सायद त्यो कनेक्ट भएन। मैले आफै पनि युट्युबमा भिडियो हेर्दा त्यति कनेक्टेड भएको पाइन।'
शृंखलाले भेट गरेर समर्थन गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएकी छिन्। आफू टप ३० मा पर्ने कुरामा आशावादी रहेको पनि बताएकी छिन्। 'हेड टु हेड जित्न सकिन, तर १७ वटा स्पोट अझै खाली छ। तपाईहरू हार नमान्नुहोला। आशा छ म टप ३० मा पर्नेछु।'
सांसदहरुको प्रश्‍न : भोको परे फोन गर्नु भन्‍ने सरकार कहाँ छ?
गृहमन्त्रीलाई अमरेशको प्रश्न : सरकारी र विप्लव नेकपाको साठगाँठ त छैन?
एक खर्ब सात अर्बको वैदेशिक सहायता, नौ खर्बको सार्वजनिक ऋण
सबैलाई पद चाहिएकै कारण एकतामा ढिलाइ : प्रचण्ड
संसदमा विप्लवमाथि बहस : कांग्रेस-नेकपा सांसदले उठाए सुरक्षा र कारबाहीका मुद्दा
स्वरूप फेरिएको सल्ले अस्पताल, फोटो